musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Bangkok Nhandare dzeKushanda se COVID-19 Munda Zvipatara
Health News • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
COVID-19 zvipatara zvemumunda
Gurukota rezvekutakurwa kweThailand, Saksayam Chidchob akataura vhiki ino kuti gadziriro yemimwe mibhedha zviuru zvinomwe yaigadzirwa nekuda kwechazvino coronavirus mamiriro akaita ezvipatara zveCOVID-7,000, sezvo huwandu hwevarwere vakamirira kurapwa.
COVID-19 zvipatara zvemumunda zvichagadzwa munzvimbo dzisiri kushandiswa panhandare nendege mbiri.
Suvarnabhumi Airport chete ichakwanisa kugara kanopfuura ka3 varwere vakawanda seBussarakham Hospital.
Japan yakapinda nemamiriyoni 1.5 emadhayeti eAstraZeneca majekiseni kubatsira Thailand muhondo yayo yekurwisa COVID-19.
Nzvimbo dzisina kushandiswa dzezvivakwa zveSuvarnabhumi neDon Mueang dzese dzichashandiswa kumisikidza zvipatara zvemumunda.
Saksayam akati hurumende yapedzisa rendi yenguva pfupi Aeroporti eThailand (AOT), nekuti chibvumirano cheBussarakham Hospital paImpact Muang Thong Thani mudunhu reNonthaburi chichapera muna Nyamavhuvhu.
Sekureva kwaVaSaksayam, chipatara chiri kuSuvarnabhumi Airport chinokwanisa kugara zvakapetwa katatu nhamba yevarwere vari paBussarakham Hospital. Uye zvakare, Don Mueang Airport iri mubishi rekugadzirira chivakwa chekuchengetera kumisikidza chipatara chemumunda, icho chinenge chiine 2,000 mibhedha yevarwere nezviratidzo zvishoma.
Japan inopindira kubatsira
Hurumende yeThai yakaita musangano wepamutemo musi wa12 Chikunguru wekugamuchira 1.5 mamirioni emushonga weAstraZeneca COVID-19 mushonga wakapihwa nehurumende yeJapan kubatsira kurwisa kupararira kwe COVID-19.